[Ankapobeny ] 30 Novambra, 2008 15:41
[Ankapobeny ] 26 Novambra, 2008 13:32
Niova bika i news2dago!
Tena mba nahavarina ahy mihitsy ny blaogin'i kdaomba tato ato izay! Ka soa moa fianatra ka dia mba nanara-dia azy kely ahy sady ohatra ny efa leo ilay endrika teo iny aho saria efa ho hivalona tokoa ity ny taona ka aelo ovaina any ny endrika efa voky taona iny. Tsy naka ilay violety ny kala pissoa aho fa ohatra loko marevaka loatra. Asa indray izao raha mbola hisy ilay soratra oe tsy mahazo mijery eto ianao rehefa mamela hafatra ny mpandalo!!! misy mantsy ny namana sasany dia tena sosotra mihitsy mahita azy iny. Somary manindry ny bokotra F5 aloha rehefa avy mamaky ny lahatsoratra izay no hafatra mba tadidiko.
Ny vaovao moa dia efa saika voatatitra atsy ambadika tanterin'ireo namana ka tsy dia hiverenako firy intsony. Ny tiako amafisina fotsiny dia ity oe nanova ekipa ny TVG mba tsy hivadika VGT angamba atsy ho atsy ka naka an'i Ny Hasina Andriamanjato sy Elia Ravelomanatsoa indray ny ao @ CUA ao ary nahongana kosa i serge Radert sy i Mme Annick.
Maro kosa ireo fonja vaky tato anatin'ny iray volana izay tatsy Ambositra moa no nitranga farany izy ity. Efa gadra 30 mahery izao no tafaporitsaka t@ izany. Mila mailo fa ho avy ny farany taona ity.